Accueil > Gazetin'ny nosy > Josekely : Tsy hanao sonia ny satan’ny fitondran-tena mendrika
Josekely : Tsy hanao sonia ny satan’ny fitondran-tena mendrika
Nohatonin’ny mpikambana avy amin’ny CFM (Komitin’ny fihavanana Malagasy) , ny Ceni (Vaomieram-pirenena mahaleo tena momba ny fifidianana), ny CNIDH (Vaomieram-pirenena mahaleo tena miaro ny zon’olombelona), ny HCDDED (Filankevitra ambony miaro ny tany tan-dalàna sy ny demôkrasia) ny Bianco (Birao mahaleo tena miady amin’ny kolikoly), ny Samifin (Sampan-draharaha miady amin’ny famotsiam-bola), ary ny fiaraha-monim-pirenena miisa 5, ireo kandida mba horesena lahatra ny kandidà hanao sonia ny fifanarahana momba ny fitondran-tena mendrika
( charte de bonne conduite et d’integrité des candidats) tamin’ity herinandro ity.
Hoy ireto mpikarakara ny satan’ny fitondran-tena mendrika ireto nanambara hoe : “betsaka ny fioharam-pefy ataon’ireo kandidà amin’ny tsy fanarahan-dalàna ka izany no antony anaovana ity sata ity”.
Toa izao no navalin’ingahy José Andrianoelison ireto komity ireto tamin’izany. “Miombon-kevitra aminareo aho ny hanaovanareo io sata io saingy tsy hanao sonia azy io aho satria izaho José Andrianoelison na Josekely matoa milatsaka hofidiana dia mahatsiaro tena fa mahatoky ny vahoaka 25 tapitrisa Malagasy ary indrindra fa ireo mpifidy 9 tapitrisa mahery. Miankina amin’ny finiavan’ny kandidà ny fanaovana mangarahara ny vola hanaovany propagandy ary tokony ho lazainy ny olona mpifidy azy izany ao anatin’ny mangarahara. Ny olana eto dia ny lalàna no mandringa ka mahatonga izano zavatra ataonareo izao”.
“Rehefa milatsaka hitondra firenena”, hoy ingahy Josekely, “dia tokony hatokisan’ny vahoaka ka inona indray no mbola hanaovana sata amin’izany?” Tamin’izay indrindra no nanambaran’ity kandidà mitondra ny laharana faha 15 ity ny fanazavana mahakasika ny zavatra hataony raha toa ka izy no lanin’ny vahaoka mpifidy hitantana an’i Madagasikara.
“Voalohany indrindra”, hoy izy, “dia tsy afaka hamitaka vahoaka aho ka hanao programa ekonomika avy hatrany nefa ny fandaniana ny volam-panjakana ho tanterahana ny taona 2019 dia ny fivorian’ny depiote amin’ny volana oktobra sy novambra 2018 no hamaritra izany ao anatin’ny teti-bolam-panjakana. Ho ahy dia ny ? ny fotoana ihany no hitantanana ny raharaha ilaina andavanandro, fa ny ? dia hatokana amin’ny fanarenana ifotony “réfondation” sy ny demôkrasia tena ilain’ny Malagasy. Tsy azo atao tandrametaka io satria io no fototra hampandrosoana firenena ka rariny sy hitsiny raha ao anatin’ny fotoana milamina no andaniana sy anaovana izany. Ampiasana aloha io Lalàmpanorenana misy ankehitriny io satria mbola azo ampiharina io mandrapahatongan’izany. Izay vinam-piaraha-monina sy lalàmpanorenana tiana sy lanin’ny vahoaka Malagasy ihany no tokony hampiharina eto aorian’izay. Izany dia azo ampiharina amin’ny lafiny fampandrosoana rehetra rehefa avy eo”.
Ohatra amin’ny tsy fahafantaran’ny mpampianatra ny vontoaton’ny PSE (programam-pampianarana) izay hampiharina eto Madagasikara manomboka amin’ny taona 2019 io, dia nanao grevy ny mpampianatra iray taona taty alohan’ny hampiharana azy. Midika izany fa tsy nisy ny fifampierana tamin’io raharaha io teo anivon’ny fampianarana fa olom-bitsy ihany no nanao izany na dia misy vola be aza hanatanterahana izany, ka izany no antony mahatonga olona amin’ny fanabeazana tsy mety vita eto izao.
Fa nihaona tamin’ny fiaraha-monim-pirenena koa ingahy José Andrianoelison na i Josekely tamin’ity herinandro ity ka ingahy Brice Lejamble sy ramatoa Faraniaina Pierre Bernard avy amin’ny Rohy no nitafa taminy ny alatsinainy faha 10 septambra 2018 teo.
Nanambara ireto fiaraha-monim-pirenena ireto fa olon-dratsy no manao pôlitika eto Madagasikara ankehitriny fa indrindra ny ao amin’ny Antenimierampirenena ao. Dia nanambara ingahy Josekely fa “rehefa tsy mifoha ianareo ao amin’ny fiaraha-monim-pirenena dia manjaka ny mpanao pôlitika tsy misy fotony. Izaho José Andrianoelison dia tsy miresaka amin’ireo mpanao pôlitika matihanina sy mahay rehefa hampanjaka ny olona tsy mahay izy ireo. Amin’izao fotoana izao dia ny olon-dratsy daholo no manao pôlitika ka tsy mila mifampikasoka amin’izy ireo ny vahoaka”.
Ho an’i Josekely dia mila mandray andraikitra ny olom-pirenena rehetra tsara sitrapo amin’ny fanarenana ity firenena ity mba tsy ho tara loatra izany. Aoka ny Malagasy rehetra hijery ny tombontsoam-pirenena sy ny tombotsoa iombonana izay manomboka hadino ankehitriny.